allsanaag.com - Turkigu ma beel Soomaaliyeed ayuu hubaynayaa
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3211	Days	12	Hours	38	Minutes	45	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Turkigu ma beel Soomaaliyeed ayuu hubaynayaa
Written by khalid	Ciidan Qaran ma jiree, Turkigu ma Beel Soomaaliyeed ayuu nagu soo hubaynayaa, mise Runta ayuu ogaan doonaa oo waxa uu Soomaali u dhisi doonaa Ciidankii qaranka Soomaaliyeed oo ay ka wada mid yihiin dhamaan Gobolada Soomaaliya iyo Beelaha Soomaaliyeed.
Maanta Mashaariicda horumarineed ,deeqaha waxbarasho iyo tababarka Ciidamada uu Turkigi ugu deeqo Soomaaliya waxa gooni u leh Beesha uu ka soo jeedo Madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Culusoow, oo maanta ku sugnaa magaalada Ankara ee Dalka Turkiga, ayaa waxa uu goob joog ka ahaa wasiirkiisa gaashaandhiga C/Xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi iyo wasiirka gaashaandhiga dalka Turkiga oo kala saxiixday heshiis ku saabsan iskaashiga ammaanka iyo milateriga, waxaana uu qeyb ka yahay dhismaha Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
Heshiiskan oo ah kii u horeeyay noociisa ee ay labada dal gaaraan, ayaa ka duwan heshiisyadii hore ee ay labada dal u gaareen oo ahaa dhinaca horumarinta iyo hirgelinta mashaariicda dib u dhiska iyo waxbarashada.Dawlada Soomaaliya hada ka dhisan maaha mid dhamaystiran, mana aha mid ku salaysan cadaalad ee waa Xisbi dagaal kula jira Beel ka mid ah Beelaha Soomaaliyeed. Waa koox diidan in Bulshada Soomaaliyeed inteeda kale noolaato aan ka ahayn inta u dhaxaysa Baladweyn iyo Baydhabo
Madaxweynaha Soomaaliya , Wasiirkiisa arimaha gudaha iyo wasiirka gaashaandhiga waxay aad ugu soo hor jeedaan maamul samaynta Jubooyinka, waana sababta ay Bulshada caalamka uga codsadeen in Cunaqabataynta hubka laga qaado. Sidoo kalena ay Dawlada Turkiga ula saxiixdeen in Maleesjiyaadkooda u tababaraan hubna ugu deeqaan.
Culusoow iyo Xisbigiisa Dhiigiisa cusub oo hubaysan waa ka xun yihiin kana khatar badan yihiin Xisbigii uu horay uga midka ahaa ee USC oo xasuuqa ka gaystay gudaha Soomaaliya.
Tobobaadkii hore wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya, waxa uu magaalada Muqdisho ka abaabulay shir lagu sheegay wadatashi ku saabsan maamul u samaynta gobolada Jubbooyinka. Ujeedadu ugu wayn ee shirkani waxuu ahaa in lagu xagal-daaciyo isla markaasna lagu fashiliyo shirka wada-tashiga ee magaalada Kismaayo uga socda beelaha walaalaaha ah ee degga gobolada Jubadda Hoose,Jubadda Dhexe iyo Gedo kaasoo ku saabsan in la sameeyo maamul goboleedka Jubbaland.
Baaris iyo dabo-gal dheer oo lagu sameeyey waxaa lagu ogaaday in madaxwaynaha Soomaaliya iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya aysan ku faraxsaneyn in la sameeyo maamul goboleed ka kooban Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose iyo Gedo, isla markaasna waxay labadan mas’uul dadaal kasta u galeen inay carqaladeeyaan hawlaha ay wadaan guddiga farsamada ee maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka.